Kuzoba kanjani e-Istanbul izinsuku ezi-4? Metro Metrobus kanye Ferry Work? | RayHaber | raillynews
[02 / 06 / 2020] Imibiko Yabantu Abakhubazekile Ukuthola Usizo Lokunakekelwa Kwasekhaya kanye Nezimpesheni Zokukhubazeka Kunwetshiwe	I-06 Ankara
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulKuzoba kanjani e-Istanbul izinsuku ezi-4? Metro Metrobus kanye Ferry Work?
Kuzoba kanjani e-Istanbul izinsuku ezi-4? Metro Metrobus kanye Ferry Work?
15 / 05 / 2020 34 Istanbul, sesitimela, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, Metro, TURKEY, tram
Ngabe isebenza kanjani i-metro, i-metrobus kanye ne-orenji ku-Istanbul phakathi nosuku?
Isikhathi sokufika, esimenyezelwe ngezikhathi ezithile ngenxa yomqedazwe weCovid-19, sizosetshenziswa futhi kusukela ngomhlaka 16 kuya ku-19 Meyi. Ngenkathi izakhamizi zase-Istanbul zihlala ezindlini zazo kulandela isikhathi esinqunyelwe izinsuku ezi-4, iningi labasizi be-İBB kanye nabaxhasi bayo bazoqhubeka nezinsizakalo zabo ngaphandle kokuphazamiseka, ukuze ukuthula kwedolobha kusebenze futhi kungasebenzi. Ukuthola ithuba lokusebenza kahle emigwaqweni yedolobha nasemigwaqweni ngezikhathi okufanele zethulwe phambilini, abakwa-IMM bazoba nethuba lokuqedela amaphrojekthi abawenzayo ezinsukwini eziyi-11 ezilandelayo ngokushesha.
Ngokwesibalo sezinyathelo zobhubhane ze-Covid-19, uMasipala wase-Istanbul Metropolitan (IMM) uzoqhubeka nezinsizakalo zawo kubahlali base-Istanbul nabasebenzi abayi-16 ngesikhathi sokufika kwezinsuku eziyi-19, esizoba semthethweni phakathi kuka-4 kuya ku-Meyi. Ngaphezu kwezidingo eziyisisekelo njengokuhamba, amanzi, igesi yemvelo nesinkwa, i-İB, ezoqhubeka nezinsizakalo zayo zokuphepha nokusetshenziswa kwemifino, izithelo, ukunakekelwa kwabadala nabakhubazekile, izinsizakalo zomngcwabo, ukulahlwa kwendle yezokwelapha nokuqinile, ithimba lezokuhlanzeka okuhamba phambili, i-ALO 11, indawo yokwakha isebenza, ngeke ulahlekile. Ezikhathi zokubekelwa ezake zamenyezelwa phambilini, i-IMM yaba nethuba lokuqeda ngokushesha okukhulu ngenxa yokuhamba kancane kwamaphrojekthi lapho izimoto nezimoto zabahamba ngezinyawo zigcwele kakhulu, ngenxa yokuphela kwemigwaqo nemigwaqo yedolobha. the İSKİ KadıköyESeyit Ahmet Creek, amanye amaphrojekthi owenziwe ogwini lwe-Ortaköy azophothulwa ngaphambi kwesikhathi esinqunyelwe ukuqeda futhi azosetshenziswa ekuqaleni kukaJuni.
AKUFUNI UKUTHOLA EMISEBENZWENI YOKUHYGIENE NEMISEBENZI YEMPILO
Amaqembu wokuhlanzeka eselula eMnyangweni wezeMpilo we-IMM azoqhubeka nemisebenzi yawo yokuhlanzeka ezikhungweni zikahulumeni nasezibhedlela. Ngokuthola izidumbu zangaphandle, abasebenzi abayi-10 bazoqhubeka nezinsizakalo zabo izinsuku ezi-5 ngezimoto ezi-4 nangokubulala magciwane abangaphakathi, abasebenzi abangama-64 bazoqhubeka nezinsizakalo zabo ngoMgqibelo, ngeSonto nangoMsombuluko ngezimoto ezingama-30. Ukuze kuliwe nomiyane obangelwe ukufudumala kwesimo sezulu, abasebenzi abangama-412 bazokwenza umsebenzi wokufafaza ngaphesheya kwedolobha ngoMsombuluko.
I-İBB, ezoqhubeka nezinsizakalo zayo zokunakekelwa kwempilo zasemakhaya ngoMsombuluko nangoLwesibili, inabasebenzi abangu-182 nezimoto ezingama-69, izosebenzela abaSebenzi bezeMilo yoMphakathi nabasebenzi abangu-15, odokotela bengqondo abangu-3 nodokotela bengqondo abangama-76 izinsuku ezine.
KUVALIWE IZIPHAKAMISI ZAMAHHALA WE-ISPARK
Izindawo zokupaka İSPARK zizovalwa izinsuku ezine. Kodwa-ke, ukuze kugwenywe ubunzima phakathi nezinsuku zokuvinjelwa, abasebenzi abangama-4 be-ISPARK bebonke, kubandakanya uNdlunkulu, Abanye Abavulekileyo Nezindawo Zokugcina Izimoto, I-Alibeyköy Cep Bus Station P + R, İstinye neTarabya Marina, iBayrampaşa Vegetable-Fruit Market kanye neMakethe yaseKoataata Vegetable-Fruit. kuzoba semsebenzini.
I-ISKI IQHAZA ENCWADINI Esebenzayo YOKUSEBENZA
Ngezikhathi zokufika ekhaya, i-İSKİ inethuba lokusebenza ngokunethezeka kakhulu ngenxa yezimoto ezisindayo nokuhamba kwabantu. Amaphrojekthi, azokuqedwa esikhathini eside, athuthuka ngokushesha ngokubonga emigwaqweni nasemigwaqweni ephumulayo. Ngaphansi komkhawulo wezinsuku ezi-4 zokuvinjelwa emsebenzini, i-İSKİ izokwenza umsebenzi wayo ezindaweni ezihlukene ezingama-5 e-Istanbul onamanzi angcolile, amanzi emvula, okuthuthuka kwemifudlana namanzi okuphuza, nabasebenzi abangama-850.
Besiktas Barbaros Boulevard, Besiktas Ortaköy, Besiktas Şair Nedim Caddesi, Besiktas Nisbetiye Caddesi, Zeytinburnu 10. Yil Stream, Bakırköy Kennedy Caddesi, Bakırköy İstanbul Caddesi, Bakırköy Yeşilköy, Bakırköy Galeria AVM, Avcılar Saadetdere, Şişli Akar Caddesi, Şişli Dolapdere Caddesi, Eyüp Haliç -Yavedüt Caddesi, Beyoğlu Dolapdere Caddesi, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi.
IPendik Ankara Caddesi (Sabiha Gökçen Airport Road), Kartal Meydan, Kartal Cengiz Topel Caddesi, Kartal Karlıktepe, Kadıköy Dock, Kadıköy I-E-5 Underpass, Kadıköy I-Dinlenç Creek, i-Üsküdar Ibhishi, Üsküdar Square, Üsküdar Libadiye Caddesi, Ümraniye Tantavi Tunnel Underpass, Ümraniye Küçüksu Caddesi, Beykoz Ali Bahadır Creek, Ataşehir Libadiye Caddesi, Tuzla Birlik.
IDOLOBHA LIZOBUYELWA, IZIBHALO ZOKUXELWA ZIQOQWE ZIHAMBELWE
I-İSTA washing, ukugeza ngomshini, ukushushuluza ngomshini nokushanela ngomshini ezindaweni zomphakathi njengemigwaqo emikhulu, amabala, iMarmaray kanye nokungenela kwezitimela zangaphansi, ukweqa - izindawo ezingaphansi komhlaba, amapulatifomu ebhasi / izitobha, iBayrampaşa ne-Ataşehir States, izibhedlela kanye nezikhungo zomphakathi ezahlukahlukene nezinhlangano. uzoqhubeka nomsebenzi wokukhipha izandla izinsuku ezine ngaphandle kokuphazamiseka.
Emisebenzini yokuhlanza ezokwenziwa yi-İSTAÇ yezinsuku ezi-4, indawo eyizigidi ezingama-2, 162 izinkulungwane ezingama-580 skwele (ubukhulu bamasimu webhola acishe abe ngu-303) izodilizwa, futhi indawo yamamitha-skwele ayi-16 555 80 wamamitha-skwele (cishe usayizi wamabala ayi-2 319 XNUMX ebhola) izohlanzwa ngokufafaza ngamathuluzi wokwenza imishini. .
UKUHLELWA KAKHULU KWENZIWE
Abakwa-İSTAÇ, ngesikhathi sokushintshana kosuku ngoMeyi 16-17-18-19, bayogeza imigwaqo emathuneni nasezindaweni ezizungeze wona ngaphansi koMnyango wamathuna we-İBB, ofanele umsebenzi wokuwasha imishini, futhi bazokwabela amaqembu aseshayo ukuthi ahlanze amaphuzu okungenakungena ezimotweni. Ekupheleni kwezinsuku ezi-4, izimoto zizoba yizikhathi eziyi-141 kuthi abasebenzi abangama-416 bazobe besemsebenzini.
UKUQOQA KWAMANZI KANYE NEMISEBENZI EYENZIWAYO
Ngasohlangothini lwase-Eshiya naseYurophu, cishe amathani angama-245 emfucumfucu yezokwelapha, kufaka phakathi izindawo zokuhlala, kuzoqoqwa izimoto ezingama-4 ngabasebenzi abangama-323 ezinsukwini ezi-55. Abasebenzi abangama-93 bazosebenzela ukulahlwa. Inani labasebenzi be-İSTAÇ elizosebenza izinsuku ezi-4 lizoba yizinkulungwane eziyisithupha nesithupha (6).
AKUKHO ZIQINISEKISO ZEGASI ZENDLELA
I-İGDAŞ izosebenza nabasebenzi abayizinkulungwane ezingama-7 kuma-shifts, ikakhulukazi amaqembu we-24/187 weZimo Eziphuthumayo, amaqembu 4 isikhungo Sezingcingo Esiphuthumayo Samagesi Esiphuthumayo kanye nethimba Logistics, ukuletha igesi yemvelo ngokuqhubekayo nangokuphepha kulo lonke i-Istanbul.
UKUSHINTSHA NGEKE KUKUDE
Izosebenzela abasebenzi abangama-621 eCity Lines, emikhunjini, kuma-piers nase-Haliç Shipyard. Ngesikhathi sezinsuku ezi-4, kuzothathwa uhambo lokuhamba ngomgwaqo oluyi-15 kohambo oluyisithupha, kuma-piers ayi-11, emikhunjini eyi-1 kanye nakwisikebhe esisodwa.
Linestinye-Çubuklu Ferry Line.
I-IETT izokwenza uhambo lwezinkulungwane ezingama-4 ezingama-42 esikhathini sezinsuku ezi-340. Zizonke izimoto eziyi-91 ezizokwabelwa izibhedlela zikahulumeni nezizimele ezingama-141.
Kunqunywe ukuthi kufakwe isikhathi sokufika ekhaya izinsuku ezine, uMgqibelo, iSonto, uMsombuluko kanye noLwesibili. Izakhamizi eziningi, njengalabo abasebenzela umphakathi, ochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo, osokhemisi, abapheki, bazoqhubeka nokuya emisebenzini yabo ngezinsuku zemikhawulo. I-IETT izoqhubeka nezindiza zayo kuze kube ngu-4: 01 ngoLwesithathu ebusuku kuma-Istanbulites okumele ahambe ayosebenza. Ezinsukwini ezimbili zokuqala zokufika ekhaya, okusho ukuthi, ngoMgqibelo nangeSonto, ukuphuma kuka-00 kuzokwenziwa nezimoto ezingama-494 ngisho nezingama-488. NgoMsombuluko nangoLwesibili kuzobe kuhleliwe izindiza eziyizinkulungwane eziyi-8 nezimoto ezingama-358 ngisho nezingu-494. Izimoto ze-Spare zizogcinelwa izicelo ezisheshayo emigqeni, futhi uma isidingo sikhona, ziyoqondiswa emigqeni efanele.
Ngaphezu kwalokho, izibhedlela ezizimele nezisonke ezingama-4 zabelwa izimoto ngesikhathi sezinsuku ezine zomsebenzi. Zingu-91 izimoto ezabelwe ukusebenza nabasebenzi basesibhedlela ngoMgqibelo, ngeSonto, ngoMsombuluko nangoLwesibili.
Kulayini weMetrobus, kuzoba nendiza ethatha imizuzu emi-06 phakathi kuka-10 ekuseni no-3 ekuseni ngoMgqibelo nangeSonto. Kuzoba nokuphuma phakathi kuka-10 no-16 njalo ngemizuzu eyi-10. Futhi, phakathi kohambo olungu-16 no-20 kuzokwenziwa njalo ngemizuzu emi-3. Izindiza ezisuka ku-20 ziye ku-24 zizobanjwa njalo ngemizuzu eyi-15.
NgoMsombuluko nangoLwesibili, kuzoba nohambo njalo ngemizuzu emi-06 phakathi kuka-10 no-3 ekuseni, njalo ngemizuzu eyi-10 phakathi kwe-16 no-10, njalo ngemizuzu emi-16 phakathi kuka-20 no-3, futhi njalo ngemizuzu eyi-20 phakathi kuka-01 no-10.
IMETROBUS TRIP RANGES
Ibanga lesikhathi Meyi 16-17 Meyi 18-19
06: 00 - 10: 00 Imizuzu ye-3 Imizuzu ye-3
10: 00 - 16: 00 Imizuzu ye-10 Imizuzu ye-10
16: 00 - 20: 00 Imizuzu ye-3 Imizuzu ye-3
20: 00 - 00: 00 Imizuzu ye-15 X
20: 00 - 01: 00 X Imizuzu ye-10
IZILWANYANA ZOKUPHILA KU-BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ
Ngesikhathi sokufika ekhaya sezinsuku ezi-4, abakwaBoğaziçi Yönetim AŞ bazoba senkampini ezikhungweni zensizakalo ye-İBB, izinhlangano ezixhumana nabo nezindawo ezisetshenziswa yizakhamizi zase-Istanbul, nethimba labantu abayi-102 abasebenza nabasebenzi bobuchwepheshe nabokuhlanza.
Ngaphezu kwalokho, kubazali abazosebenzisa isikhathi ekhaya ngenxa yokuvinjelwa, Isazi Sezengqondo Isazi Sezengqondo uCeyda Yanar sizohlangana nezilaleli ngengxoxo nokuqukethwe “Kwezingane nokuphatha ukukhathazeka ngesikhathi sePandemic” ekusakazweni bukhoma kwe-akhawunti kaBoğaziçi Yönetim Instagram ngeSonto ngo-16:00.
IMISEBENZI YOKUSEBENZA IYAQHUBEKA
I-İSTON, iHacı Osman Grove, indawo Kadıköy Isakhiwo saseKurbağalıdere Yogurtçu Park nokwakhiwa kwendawo phakathi kweModa, Atatürk Olimpiki inkundla yemigwaqo, iBeylikdüzü kanye ne-Avcılar kwabahamba ngezinyawo ngokweqile nokulungiswa kwezakhiwo, iGreatztepe Metro Station, i-Kağıthane Metro Station Ukungena Kwendawo Yesitaladi, Umgwaqo Oqiniswe Kukhonkolo odongeni kanye Nokuhlelwa Kwezigodi Zangaphansi, Isiteshi SaseMishini Yeni Mahalle, Isikhungo Sokuphehla seKaradeniz Mahallesi, ukuhlelwa kwezindawo, ukuhlelwa kwezokuhamba kwezimoto zaseGüngören Kale Center, ukuhlelwa kwendawo yabahamba ngezinyawo yabaHasan Tahsin Street, i-IETT Garage kanye ne-Havaist Plaza Izindawo Zokwakhiwa KweSakhiwo, iSaltuk Umsebenzi wokwakha indawo yokwakha ukhonkolo waseBuğrahan Street Concrete Paintment, iBaaml Caddesi Concrete Pavement Construction, indawo eyakhiwe ngezinyawo zabahamba ngezinyawo i-Şamlar Caddesi, iSarıyer Özdereiçi ukwakha udonga lwamatshe, iBeylikdüzü Cemevi.
Umsebenzi uzokwenziwa futhi emisebenzini yokulungisa nokulungisa amapaki wezingane ahlukahlukene ngaphansi kweDirectorate of Parks and Gardens. Kulesi simo, ingqikithi yezisebenzi ezingama-779 ISTON nabasebenzi abasebenza ngaphansi. Ngaphezu kwalokho, ukukhiqizwa kuzokwenziwa ngaphandle kokuphazamiseka e-İSTON Hadımköy naseTuzla fektri phakathi komhla ziyi-16 kuya ku-Meyi.
17 IZINDLELA 840 TON ASPHALT CALLING CredING AUDEDE
I-İSFALT izoba sendimeni enabasebenzi abangama-853 yokwenza umsebenzi wokukhiqiza i-asphalt kanye nemisebenzi yokufaka asphalt kanye nabasebenzi abangama-260 bokusebenza ngamagciwane.
Izifundo kule nqubo; Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kadıköy, IBüyükçekmece, uSarıyer, iBayrampaşa, iBeylikdüzü, iBağcılar, Avcılar neBakırköy. Kuhlelelwe amathani angama-17 esicelo so-asphalt.
UKUDLA KWEMPILO AKUYOKWAMKELA
Kuzoqashwa izimoto ezingama-270, abashayeli bezimoto ezingama-270, abasebenzi bezenhlalo abangama-270 kanye nabasizi abangama-270 ukuletha amaphakheji okusiza kwizakhamizi zethu eziswele ezonqunywa yi-Social Services Directorate.
Ezokuhamba, indawo esebenza ngogesi, indawo yokudlela kanye nezinsizakalo zokubulala amagciwane zizoqhubeka ngezinsuku okufanele zenziwe ngezikhathi zokufika ekhaya ukuze izinsizakalo zomphakathi zenziwe ngaphandle kokuphazamiseka.
UKULUNGISELELA NOKUXHESHWA KWENZIWE
Isikhungo Sokuxhaswa Kwezinsiza sizoqhubeka nokusebenza amahora angama-24 ngosuku ukuqinisekisa ukuthi izinsizakalo zomphakathi zenziwa kahle futhi nokuthi izinsizakalo zomphakathi zingasekelwa futhi zixhaswe. Izidingo zokudla ze-iftar nezaseSahur zizolungiswa futhi zilethwe kubasebenzi bokukhiqiza umlilo abangama-7 kanye nabacimi bomlilo emakhishini ayi-88.
Isikhungo Sokuxhaswa Kwezinto Eminye imisebenzi okufanele iqhubeke izinsuku ezine imi ngale ndlela elandelayo;
- Amatafula amhlophe ayi-153, uMnyango wamathuna, amaPhoyisa kaMasipala nabo bonke abasebenzi abaphethe, uma kuyimiyalo, nangemiyalo ye-sahur bazohanjiswa emahhovisi abo.
- Izidingo zokudla neziphuzo zezakhamizi zethu ekamu elingenamakhaya zizoqhubeka ukuhlangatshezwa.
-Uma -tartar, cishe abantu abayizinkulungwane eziyishumi bazolungiselwa omasipala bezifunda abafuna lokho.
- Izinsizakalo zokuthola indawo yokuhlala zizoqhubeka nokunikezwa ochwepheshe bezempilo abangama-32 eZeytinburnu Social Center.
- Izidingo zokudla neziphuzo zochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo okuhlala emahhotela zizohlangatshezwa.
ALO 153 24 AMAHORA NGESIKHATHI
Isikhungo sezingcingo sakwa-Alo 153, esihlinzeka ngosizo kuzo zonke izici ze-Istanbul, sizosebenza amahora angama-24 ngosuku ekubekeni isikhathi. Isibalo sabasebenzi abazosebenza amashifu sizoba ngu-691.
I-IMM izohlela imisebenzi ye-19 Meyi endaweni yedijithali ngenxa yezindlela zokuhlasela nobhubhane. Amakhonsathi azokwabiwa kuma-akhawunti wezindaba zomphakathi woMnyango Wezamasiko we-IMM phakathi komhla ziyi-16 kuya ku-Meyi; Ukuqoshwa kwamadokhumenti, ifilimu nokubukelwa kwemidlalo yeshashalazi neminye imicimbi eminingi kuzokwenza ukuthi izakhamizi zase-Istanbul zijabulele idili lemizi yazo.
4-USUKU LOKUQINISEKISA UKUQINISEKISA KUSUKELA KWEMIDLALO ISTANBUL
I-SPORTS ISTANBUL, ngoMsombuluko, ngoMeyi 18, phakathi kuka 21:00 no 22:00 @ ıbbsporistanbul wenatube iziteshi nama-chess tv wenatube I-İBB Spor İstanbul Online Chess Tournament Final Night izosakazwa esiteshini sayo. Imidlalo yokusakaza ebukhoma, isidlali se-chess wenatubeUSabri Can uzophawula nomengameli uGürcan Engel noTalha Emre Akıncıoğlu. Ngaphezu kwalokho uRenay Onur, Imenenja-jikelele yakwaSpor Istanbul, uzoba yisimenywa.
NgoLwesibili, Meyi 19, lapho kuvulwa i-Atatürk Kent Orman, ukubamba iqhaza kwamaqembu agijimayo nabasubathi kuzwelonke kuzobamba iqhaza ekusekelweni kwe-Sports Istanbul, Istanbul Metropolitan Municipality Parks and Gardens Directorate ukusetshenziswa kwethonya lemidiya yezenhlalo.
Eminye imisebenzi ezonikezwa abasebenzisana ne-İBB ngomhla ka-16 kuya ku-17 kuya ku-18 imi ngale ndlela elandelayo:
I-Istanbul Isinkwa Somphakathi: Sizoqhubeka nokusebenza ngokuphelele ngezimboni ezi-3, ama-buffets angama-514 nabasebenzi abayi-364.
SYÖN AŞ: Imikhiqizo Yasolwandle yaseGürpınar kanye Kadıköy Izosebenza nabasebenzi abangama-50 eMakethe ngoLwesibili.
İSBAK AŞ: Ukusayinwa kukaMetro, izinhlelo zokusayina, ukufakwa kohlelo, ukufakwa, ukufakwa kanye nokusebenza kuzoqhubeka nabasebenzi abangama-108 kulo lonke idolobha.
I-Beltur AŞ: Izibhedlela ezingama-40 zizosebenza zinabantu ababalelwa ku-55 ezindaweni ezingama-400.
I İSTTELKO: Ukuze kugcinwe zonke izinhlelo zezingqalasizinda zokuxhumana ngaphandle kokuphazamiseka, i-Data Merkei izoqhubeka nokusebenza ngaphandle kokuphazamiseka, inengxenye yezingcweti ezingama-10 zochwepheshe, eziyi-30 ezinsizakalweni ze-WIFI, eziyi-8 ezinsizakalweni zeWIFI, eziyisithupha ezinsizakalweni ze-IT kanye nezingama-6 ezinsizakalweni zezingqalasizinda.
QAPHELA AŞ: Ngesikhathi sokufika ekhaya sezinsuku ezi-4, abasebenzi abangama-5 bazoqhubeka nokusebenza ezindaweni ezingama-860.
I-AĞAÇ AŞ: Njengengxenye yokulungiswa nokuhlelwa kwendawo ebanzi ye-Istanbul ebanzi, abasebenzi abangama-723 bazoqhubeka nomsebenzi wabo ngezimoto ezingama-306.
İSPER AŞ: Isibhedlela, Impilo Yasekhaya, Izinsizakalo Zomphakathi, Amaphoyisa, Ukuxilongwa Kwangaphandle Nokwelashwa, İSKİ, Izinsizakalo Zokukhubazeka, Imisebenzi Yomngcwabo, Imisebenzi Yezingane, Intsha Nemidlalo, Ubudlelwano Bomphakathi, Ukuqondiswa Kwezindawo, Isimo Sezulu Esiphuthumayo, i-HGzŞ Sizoqhubeka nokusebenzela i-Istanbul kanye nezakhamizi zayo ezinabasebenzi abedlula izinkulungwane ezine abasebenza ku-Women Family Services, Orchestras and Theatre, Revenueation of Orphaned Animal.
UMnyango Wezamathuna i-IMM: Izosebenzisana cishe nabayinkulungwane yabasebenzi abangama-245 nezimoto zenkonzo ezingama-350 ukuze izinsiza zingaphansi.
I-Istanbul Fire Brigade: Izosebenza nezimoto ezingama-849 nezisebenzi ezingama-2.
Amaphoyisa e-IMM: Ngaso sonke isikhathi sokufika ekhaya, abantu abayizinkulungwane ezingama-23, izimoto ezingama-483 namaqembu angama-220 azosebenza ngokushintshana, ukude nokushintshana. Kuzohlinzeka ngezinsizakalo ezindaweni eziningi kusukela ekuphathweni kwezindawo zokusebenza okufanele zihlale zivaliwe ukuhlangana nezidingo zokuhamba kwabasebenzi bezempilo.
Hamidiye Aye: Ngenkathi ukukhiqiza nokuhambisa kuqhubeka izinsuku ezine, eminye imishini izokwenziwa ngoMeyi 4. Izisebenzi zaseHhovisi; ngaphandle kokuthi kunesidingo esiphuthumayo, isikhathi okufanele sibekelwe ngaso ekhaya ngeke sisebenze ngalezo zinsuku. Abadayisi abangu-19 bazoqhubeka nokusebenza izinsuku ezingama-167 ngezimoto ezingama-263 nabasebenzi abangama-760.
IMetrobus, iMetro neSteamboats zizosebenza izinsuku ezi-4 e-Istanbul
Kuzoba kanjani ukuThutha kweNsonto e-Istanbul? Ngabe iMetro, Metrobus neSteamboats zizosebenza?
Kuzoba kanjani ezokuThutha koMphakathi e-Ankara izinsuku ezi-4?
Ngabe iMetro neFerry basebenza ngeNsonto e-Istanbul?
Kukuziphi Izikhathi Zokuhamba Komphakathi Kwempelasonto e-Istanbul ..? I-Metrobus, Ibhasi,…
Ukuqala Kohambo Lwama-Metro Istanbul's Night! .. Kuzohlinzekwa kanjani Ezokuphepha? .. Ubusuku ...
Ngabe iMetrobus Metro neFerry basebenza ngeNsonto e-Istanbul?
UMetrobus wasala endleleni ... Metrobus waphila ... Metrobus unje, metrobus unje, unjani…
Kuzobekwa Kanjani Ukuvalwa Komphakathi KwezokuThutha e-Istanbul?
Ungayithola Kanjani Ikhodi ye-HES nge-SMS? Ungayithola kuphi futhi kanjani ikhodi ye-HES? Ngabe ikhodi ye-HES isebenza izinsuku ezingaki?
Isikhumbuzo Esihlanganisiwe Sizobe Siyingqayizivele Ngosuku Lwe-10
Ukuthuthwa Komphakathi Kuzokhululeka Phakathi ne-Bayram Nge-Eskişehir
I-Bus Metro ne-Steamers e-Istanbul eRamazan Bayrami
UMnyango WezokuThutha kuSuku Lwesiteshi se-Istanbul Uhlelo
Isimo Somoya Asizosetshenziswa kuma-ESHOT nakumabhasi we-IZULAS Wezempilo
KaMasipala Amabhasi e Kocaeli Ehlanganisiwe 2 Million Amakhilomitha Inyanga
Imidlalo Yezwe Yomoya Yokuqala
Namuhla emlandweni: NgoJuni 4, 1900 kuya kukaSultan Abdulhamid's Hejaz Railway
IShoedex2020 Fair Virtual yandiswa ukuya kumhla ziyi-4 kuNhlangulana Ngenxa Yentshisekelo Ejulile
Izindiza Zenziwe kabusha esikhumulweni sezindiza i-Trabzon
Amanani Abagibeli Ahlelwe kabusha Izimoto Zezithuthi zomphakathi e-Ankara
UNgqongqoshe uKaraismailoğlu: 'Isitimela Esiphezulu Sezwe lonke sizokhiqiza iTÜRASAŞ'
Ithrafikhi Ye-Bursa Manje izohlinzekwa nge-EDS
Izindiza ze-Line 250G ziyaqhubeka ukusuka lapho zashiya khona ngoJuni 4
Izindiza ze-Line 250 ziyanda ngoJuni 4
Umphathi Wezokuhamba Komphakathi Ujabule eKocaeli
MachineSBAK Mask Disinversal Machine Yenziwe
Imiphumela Yokwazisa Ngobuchwepheshe Bemboni Iyaziswa
I-COVID-19 Resistance Action Plan kusuka ku-Izmir
Isimemezelo seTender: Ukuhlanza iDebus kumabhuloho namaCollver
Juni 5 @ 10: 00 - 11: 00
Ukubuyiselwa Kwama-Glass Insulators phakathi kweMamure Fevzipaşa Izikhungo ngeSilicon Insulator Result of Tender Approximate izindleko zeTCDD 6th Regional Directorate of Turkish State Railways (TCDD) 2019/548184 [Okuningi ...]
Itholakala phakathi kwezindiza zezindiza zeTrabzon Airport ngenxa yezithuthi zomgwaqo ezibaluleke kakhulu eTurkey kwavulwa inyanga eyodwa yavuselelwa. I-Governor of Trabzon İsmail Ustaoğlu kanye noMasipala Wamadolobha amakhulu [Okuningi ...]
ukuthambekela kwedolobha laseTurkey elizinze kwezobuchwepheshe kwezomnotho wezwe kuyaqhubeka nokuqhakambisa ukwesekwa kweBursa. Ama-'Sckckriers 'asetshenziswa yi-ASELSAN, inhlangano eqinile yomkhakha wezokuvikela, ngokungenisa ngamanani aphezulu [Okuningi ...]
I-ASELSAN Igcwalisa Quarter yayo Yokuqala Ngokukhula Okuqinile
Ngemuva kwezifundo zesayensi ezixhumanisa ubhubhane lwe-coronavirus nokungcoliswa komoya, iKhomishini yaseYurophu isimemezele iphakethe lokuthuthuka kwesimo sezulu ngama-750 ezigidigidi ezingama-Euro, kanye nama-Euro ayizigidi ezingama-20 ukuthola 'ukuthutha okuluhlaza'. [Okuningi ...]
Isikhathi Sokuthengiswa Kwe-Intanethi ekuhwebeni Kwezimoto Kwesibili
U-Altepe wachaza: Phakathi komgwaqo waseMudanya kuzogcinwa ezokuthutha zomphakathi futhi kuyoba nomugqa we-metrobus
Imigwaqo Engamatasa Yedolobha Yadalelwa Izinsuku Ezine eMersin!
Ibhuloho yamahhala, umgwaqo omkhulu kanye nokuthutha komphakathi ngesikhathi sedili
Ezokuthutha Zomphakathi Ezamahhala e-Adana
I-17, usuku lwezikole zokuthutha zomphakathi e-Istanbul, likhululekile ngo-Septhemba
Nextbike Konya Smart Bike Izikhungo